Haween-weynaha Beelaha Sacad Muuse oo taageeray Shirka Madax-dhaqmeedka Beeshu Dhawaan Iclaamiyeen | Salaan Media
Hargeysa (SM)- Haween-weynaha Beelaha Waqooyiga Iyo Galbeedka Hargeysa (Sacad Muuse), ayaa maanta isugu yimi kulan ballaadhan oo taageero u ah shirka Madaxdhaqmeedka Beeshaasi dhawaan iclaamiyeen.
Shirkan Haween-waynaha Beelaha Sacad Muuse oo ku qabsoomay Hotel Maansoor ee Magaaladda Hargeysa oo ay iskugu yimaadeen badiba hormoodka Haweenka Beesha Sacad Muuse, ayaa ujeedadiisa koowaad ahayd taageerada ay u hayaan in beeshoodu shir loo wada dhan yahay isugu timaado dhawaan.
Kulankan oo ay ka hadleen Haween aad u tiro badan oo goobta ka muujiyey sida loogu baahan yahay in taageero la siiyo shirka Madaxdhaqmeedka, ayaa sidoo kale lagu taageeray Wada-hadaladii dhawaan Magaaladda Ankara ee xarunta dalka Turkiga ku dhexmaray Somaliland iyo Somalia.
Ugu horeyn waxa halkaas ka hadashay Hooyo Sahra Cabdi Xoosh oo tilmaantay inay muhiim tahay in taageero kal iyo laab ah la siiyo shirka Beesha ee dhawaan la qorsheeyey, iyadoo ku dheeraatay inaanay kulankoodan ujeeddo kale ka lahayn, waxaanay tidhi, “Waxaanu halkan isugu nimi inaanu taageerno fikirka fiican ee raggayagu keenay kaas oo ah in beeshu isugu timaado shir gaar u ah oo wanaagga iyo tawfiiqda Beesha lagaga Hadlayo, arrintaana waxaanu u nahay taageerayaal dhamaantayo”.
Marwo Malyuun Xaaji Maxamed oo iyaduna goobta ka hadashay ayaa sheegtay inay kulankan u qabteen sidii ay u muujin lahaayeen in beeshu shirka soo socda gacmo furan ku soo dhawaynayso, waxaanay tidhi, “Waxa farxad noo ah Haddaanu nahay haweenka Beesha Sacad Muuse inaanu maanta halkan isugu nimi annaagoo muujinayna taageerada muuqata ee aan qarsoonayn ee aanu u hayno shirka beeshu dhawaan isugu imanayso, sidoo kale waxanu si aad ah ugu sheegaynaa cidkasta oo beesha ka mid ah inay shirkaas qaybtooda ka qaataan oo taageero dhinac walba ah siiyaan.”
Sidoo kale waxa ay Marwo Malyuun hambalyo u dirtay Weftigii madaxweynaha ee dhawaan shirka kaga qayb galay dalka Turkiga, “Waxaanu dhamaantayo hambalyo kal iyo laab ah u diraynaa Madaxweynaha Somaliland iyo waftigiisii shirka guusha xambaarsan kaga qayb galay dalka Turkiga, waxaanu leenahay guusha aad soo hoysay mid la mid ah ayaan kaaga rejaynaynaa inaad shirarka kalena ka keentid,” ayuu yidhi Malyuun.
Filsan Xuseen Khaliif oo ku hadlaysay afka dhallinyarada Beesha Sacad muuse oo halkaas hadallo kooban ka soo jeedisay ayaa tilmaantay inay guud ahaanba beeshu si niyad sami leh u taageerayaan inay shir isugu wada yimaaddaan, waxaana ay sheegtay inay Haween iyo Ragba aad u soo dhaweynayaan inay beeshu shir danaheeda la xidhiidha isugu timaaddo.
Hooyo Hibo Muxumed Xaaji Cabdilaahi oo goobta ka hadashay ayaa sheegtay inay haweenka beeshu aaminsan yihiin in shir beeshu isugu timaado taasina aanay wax dhibaato ah keeni doonin, balse ay isku soo dhawaansho iyo wada-shaqayn hor leh beesha u horseedi doonto.
Kawsar Muxumed Warsame oo hadalo u badnaa soo dhawaynta shirka beeshu qabsanayso halkaa ka jeedisay, ayaa si aad ah u cabbirtay dareenkeeda la xidhiidha muhiimadda shirkaa iyo sida baahida loogu qabo in beeshu shirweyne ay u wada dhan tahay ku yeelato deegaanadeeda Somaliland, waxaana ay xustay inaanay ujeeddo kale oo aan ahayn taageerada shirka isugu iman.
Haween tiro badan oo iyaguna goobtaa ka hadlay ayaa dhamaantood ku dheeraaday taageerada hiilka iyo hoodaba leh ee ay u hayaan shirka beeshooda iskugu imanayso ee Madaxdhaqmeedka beeshu iclaamiyeen, kuwaas oo dedefeeyey wax ay ugu yeedheen inay wataan dad dano gaar ah leh oo damacsan in shirka beesha la Majaro-habaabiyo, waxaana ay si cad u sheegeen inay rejaynayaan, isalamarkaana ka shaqayanaan in shirku noqdo mid isku xidhka iyo wada jirka beesha wax weyn ka tara.
Shirkan Haween-weynaha Sacad Muuse isugu yimaaddeen, ayaa waxa daba-socda baaq ka soo baxay shir Madaxda-dhaqanka beeshaasi dhawaan ku iclaamiyeen sidii dhamaanba qaybaha kala duwan ee beesha loo ogaysiin lahaa shir ballaadhan oo dhawaan ay beeshu yeelan doonto.